BERKSHIRES UFO MEMES - မဖြေရှင်းနိုင်သောနက်နဲသောအရာဖြစ်စဉ်အပေါ်အကျဆုံးဆုံးသောတုံ့ပြန်မှုများ - သတင်း
မဖြေရှင်းနိုင်သေးသောနက်နဲသောအရာများပေါ်တွင် Berkshires UFO အကြောင်းဤ ၂၁ ချက်သည်ပုံပြင်ထက် ပို၍ ဆိုးသည်
Netflix အပေါ်မဖြေရှင်းနိုင်သောနက်နဲသောအရာ၏ Berkshires UFO ဇာတ်လမ်းရိုင်းကြောင်းပြောမလိမ်ပါ။ ဒါပေမယ့်သင်ကနောက်ထပ်အတည်ပြုချက်ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကျောကုန်းပေါ်က memes တွေပါ Berkshires UFO ပုံပြင် လုံးဝ unhinged ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်သည်မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၊ Berkshires မှလူများ၏ဇာတ်လမ်းများကိုဖော်ပြပြီး UFO တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ပြီး ၁၉၆၉ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်ညတွင်မြေပြင်၌တွေ့ကြုံမှုအမျိုးမျိုးရှိကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ သူ့ဟာသူကြောက်မက်ဖွယ် AF နှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲ၏အဆုံးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီး ... ယုံလား
Unsolved နက်နဲသောအရာများ၏ Berkshires UFO ဇာတ်လမ်းတွဲအချို့တော်တော်ရိုင်း memes နှင့်တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကြောင့်သရော်စာ - ဒီမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ UFO ၌တည်၏
- ကေတီ Skelly (@kskellinator) ဇူလိုင်လ 7, 2020
အဆိုပါဖြေရှင်းနိုင်နက်နဲသောအရာ Ufo ဇာတ်လမ်းတွဲ ... idk, dude
- somke နဂါး (@peachesxvx) ဇူလိုင်လ 5, 2020
Unsolved နက်နဲသောအရာ၏ ufo မျက်မှောက်ရေးရာဇာတ်လမ်းတွဲသည်ကျွန်ုပ်ဝန်ခံရန်သက်တောင့်သက်သာရှိသောကြောင့်ငါ့ကိုထွက်ပြေးစေခဲ့သည် pic.twitter.com/4MENdTREdG
- liabahassan (@ liabahassan1) ဇူလိုင်လ 6, 2020
မဖြေရှင်းနိုင်သောနက်နဲသောအရာ၏ alien ည့်သည်အာဂန္တုကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ဤသူများအကြားပြည်တွင်းစစ်ပွဲကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းသည်အလွန်အရူးဖြစ်၏။ pic.twitter.com/GWk59chw1l
- ရာခေလဟာပါ (@rachelrockstar) ဇူလိုင်လ 3, 2020
ကျွန်ုပ်သည်မဖြေရှင်းနိုင်သောနက်နဲသောအရာများကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးသူတို့မှာ UFO အကြောင်းပါ ၀ င်ပြီးကျွန်ုပ်နှင့်တူသည်။ သင့်ရဲ့သူကပြောတယ်မိုင်ထုတ် yall ... .wait ။
- ပီတာလိုပက်ဇ် (@ suicideslastca1) ဇူလိုင်လ 2, 2020
သစ်ကိုမဖြေရှင်းနိုင်သောနက်နဲသောအရာပေါ်မှာဤကောင်လေးရဲ့ UFO ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းကြယ်သည်။ ဒီလူကဒီဟာကသူ့အခွင့်အရေးပဲဆိုတာသိတယ် လိုပဲသူသည်ဤအမှုကိုပြုဒီအကယ်ဒမီရဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့ဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ခဲ့တယ် pic.twitter.com/X9mIKX7uT9
- KFC (@KFCBarstool) ဇူလိုင်လ 3, 2020
၈။ နောက် ၃-၅ ရက်ကြာကျွန်ုပ်အား ဆက်သွယ်၍ မဆက်သွယ်ပါနှင့်
UNSOLVED နက်နဲသောအရာ၏ UFO ဇာတ်လမ်းတွဲအပေါငျးတို့သ binging, brb pic.twitter.com/5rlZf27RRx
- Jon DeHaan (@JonOnAString) ဇူလိုင်လ 5, 2020
အဆိုပါစီးရီးဟာ UFO ဇာတ်လမ်းတွဲသည်အထိအကြီးသွားခဲ့သည် #UnsolvedMysteries pic.twitter.com/NWh5YJcJn1
- anthony (@IceCreamTony) ဇူလိုင်လ 5, 2020
ယနေ့ကျွန်ုပ်၏အမေနှင့်အတူမဖြေရှင်းနိုင်သောနက်နဲသောအရာရှိသမျှနှင့်ရောနှောနေသူတစ် ဦး အနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုသင်စိတ် ၀ င်စားပါစေ။
၅။ တစ်အိမ်လုံးကိုကျော်လွှား။ ရသော UFO မိသားစုများအားလုံး၏သက်သေ ၅ ခု။
- marshmalaya (@nomsandnaps) ဇူလိုင်လ 3, 2020
11. ငါ့ ဦး နှောက် frazzled ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
- မျိုးစေ့များ (@heybiji) ဇူလိုင်လ 4, 2020
လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဘယ်အချိန်မှာငါတို့မဖြေရှင်းနိုင်သေးသောနက်နဲသောအရာသစ်များ၏ Berkshire UFO ဇာတ်လမ်းအကြောင်းပြောဆိုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေမည်။
- ဂလာရီ Holly အစိမ်းရောင် (@winnersusedrugs) ဇူလိုင်လ 6, 2020
13. Idc ငါသူတို့ကိုငါယုံကြည်တယ်
the berkshire ufo မျက်မြင်သက်သေများ ... .. siz သူတို့သင်္ချိုင်းတွင်း၌ကျိန်ဆို siz ကြောင့်ငါကငါ့ကိုတွားတတ်သောအစစ်အမှန်ဖြစ်ရပြီ #unsolvedmysteries pic.twitter.com/qi8UCVigSE
- | #blm (@soundandstars) ဇူလိုင်လ 5, 2020
ရိုးသားဖို့သူတို့ထံမှ 14. ဆင်းရဲသား
- အဲလက်စ် Xolo️‍ (@itsAlexxolo) ဇူလိုင်လ 5, 2020
ငါကသူကိုသံသယ ၀ င်ပေမယ့် Berkshire UFO ရဲ့ Unsolved Mysteries ဇာတ်လမ်းတွဲကိုကြည့်နေခဲ့တာ။ pic.twitter.com/da5njw6gRV
- Lauren Crothers (@laurencro) ဇူလိုင်လ 2, 2020
ကိုယ့်မဖြေရှင်းနိုင်သေးသောနက်နဲသောအရာသစ်များ၏ Berkshire UFO ဇာတ်လမ်းအကြောင်းပြောပြရန်လိုသည်
- Kanye (@tonjibyrd) အတွက်မဲမပေးပါနဲ့ ဇူလိုင်လ 2, 2020
မဖြေရှင်းနိုင်သောနက်နဲသောအရာများ၏ Berkshire UFO ဇာတ်လမ်းတွဲငါအစဉ်အမြဲငါစောင့်ကြည့်သို့မဟုတ်ဖတ်ပါဂြိုလ်သားအပြန်အလှန်၏အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက shit af အရူးဖြစ်ပြီးအင်တာဗျူးလူတိုင်းရိုးသားသလိုပဲ။ အရာအားလုံးအမှန်တကယ်တက်စီတန်း, u ငါသံသယတယ်ငါသိ၏
- သားရေလုပ်သမား (@protectyoneck__) ဇူလိုင်လ 2, 2020
The #BerkshireUFO ဇာတ်လမ်းတွဲ #UnsolvedMysteries အပေါ် @netflix မျက်မြင်သက်သေများစွာပါ ၀ င်ပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မသိခဲ့ကြသော်လည်းအလားတူအတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေခဲ့သောဆွဲဆောင်မှုကောင်းသည့်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်
ငါ့ tinfoil ဦး ထုပ်ကိုထုတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ် pic.twitter.com/pA0qeRJFmD
- Craig Lin (@CraigLin) ဇူလိုင်လ 6, 2020
UFO / ET သုတေသနပြုမှုတစ်ခုလုံးပြီးနောက် Berkshire UFO Unsolved Mysteries ၏ဇာတ်လမ်းတွဲကိုကြည့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်။ pic.twitter.com/ho0hbVfxo1
- စောင့်ရှောက်လော့ Weird Podcast ™ (@KeepItWeirdCast) ဇူလိုင်လ 7, 2020
20. ငါဘယ်လိုခံစားရဖို့မသိရပါဘူး !!!
ဒီ UFO ဇာတ်လမ်းတွဲ #UnsolvedMysteries ဤကဲ့သို့သောဂြိုလ်သား shit ကိုလာသောအခါငါအလွန်သံသယမိပါတယ်ဒါပေမယ့်ဒီ kinda ရူးသွပ်သည် ??? ဟမ် ??? pic.twitter.com/qn4zRJRK1g
- Little L (@lilythecreator) ဇူလိုင်လ 6, 2020
Unsolved နက်နဲသောအရာများ၏ Berkshire UFO ဇာတ်လမ်းတွဲကြည့်ပြီးနောက်ငါ့ကို pic.twitter.com/tfZqnFCTp1
- Luc Gerken (Gerken229 @) ဇူလိုင်လ 4, 2020
အကယ်၍ သင့်တွင်ဤအချက်အလက်သို့မဟုတ်မဖြေရှင်းနိုင်သောနက်နဲသောအရာဖြစ်စဉ်များမှအချက်အလက်တစ်ခုခုရှိပါကသင်တင်ပြနိုင်သည် အဆိုပါ Unsolved က်ဘ်ဆိုက်ကနေတဆင့်။
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အသင်၏အကောလိပ် GPA ကိုကြည့်ကြပါ
မဖြေရှင်းနိုင်သောနက်နဲသောအရာ၏ပထမခြောက်ကြိမ်ကိုယခု Netflix တွင်ရနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် Netflix ၏သတင်းများ၊ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုများနှင့်မှတ်တမ်းများအတွက် Facebook ပေါ်မှာ Netflix ၏သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်းလိုပဲ။
• မဖြေရှင်းနိုင်သောနက်နဲသောအရာများဖြစ်သော Berkshires UFO တွင်ဘာဖြစ်ခဲ့သနည်း။ ဒီနေရာမှာသီအိုရီရှိပါတယ်
• Netflix ၏မဖြေရှင်းနိုင်သေးသောနက်နဲသောအရာအားဤတုံ့ပြန်မှု ၃၉ ခုသည်အမှန်တကယ် rollercoaster တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်
• Netflix ရဲ့မဖြေရှင်းနိုင်သောနက်နဲသောအရာမှ Patrice Endres မှဖြစ်ပျက်သောအရာအားလုံးသီအိုရီများ
• Netflix ရဲ့မဖြေရှင်းနိုင်သေးသောနက်နဲသောအရာများမှ Rey Rivera ဘာဖြစ်သွားသလဲ။ ဤရွေ့ကားသီအိုရီဖြစ်ကြသည်